ထုတ်ကုန်များသတင်း - Zhuji Feihu ချည်မျှင်စက် Co. ,, Ltd မှ
သင်ဒီမှာပါ : နေအိမ် >သတင်းအချက်အလက် >သတင်း >ထုတ်ကုန်များသတင်း
Knititn စက် Fuction
တစ်ဦးကဇာထိုးစက်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်အပြည့်အဝ automated fashion.There အတွက်ထိုးပြီးပိတ်ထည်ဖန်တီးရန်အသုံးပြုတဲ့ device ကိုဇာထိုးစက်တွေမြောက်မြားစွာအမျိုးအစားများဖြစ်ပါတယ်, အလွန်အမင်းရှုပ်ထွေး mechanis ပြောင်းရွှေ့အစိတ်အပိုင်းများကိုအဘယ်သူမျှမနှင့်အတူရိုးရှင်းသော spool သို့မဟုတ်ဘုတ်အဖွဲ့တင်းပလိတ်များထံမှအထိ ...
စက် winder အသုံးပြုမှုကိုအကွေ့အကောက်များသောချည်ခင်
တစ်ဦးကအကွေ့အကောက်များသောစက်သို့မဟုတ် winder ထုပ် string ကိုများအတွက်စက်ဖြစ်ပါသည်, twine, ကျစ်�ကြိုးိုး, အပ်ချည်, yarn, ကြိုးကြီး, သံကြိုး, ကျပ်ကြိုး, တိပ်ခွေ, စသည်တို့ကို. တစ်ဦး spool ပေါ်သို့, bobbin, reel, စသည်တို့ကို ....
Winders အထည်အလိပ်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအတွက်အကြီးအကျယ်အသုံးပြုကြသည်, အထူးသဖြင့်ကြိုးတစ် bobbin ပေါ်သို့အနာ, ပြီးတော့တစ်ဦးလွန်းများတွင်အသုံးပြုသည်အဘယ်မှာရှိယက်လုပ်ခြင်းမှပြင်ဆင်မှုအတွက်. ဘောလုံးကို winders ခသို့ skein ပုံစံကနေကြိုးတက်လေကြောင်း winder ၏အခြားအမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်း ...
ချည်မျှင်စက် Spinning open-အဆုံး
ဒါဟာအစချိုးချည်ငင်သို့မဟုတ်ရဟတ်ချည်ငင်အဖြစ်လူသိများသည်. Open-အဆုံးချည်ငင်နောက်ကွယ်မှနိယာမစာရွက်များအပြည့်အဝ spinning တစ်အဝတ်ခြောက်စက်၏ဆင်တူသည်. သငျသညျတံခါးကိုဖွင့်လှစ်ပြီးစာရွက်ဆွဲထုတ်နိုင်ပါလျှင်, သင် Pu အဖြစ်အတူတူလည်မယ်လို့ ...
အထွေထွေစက်တွေလေဟာနယ်ထုပ်ပိုးနှင့်အတူရှိသော. အထူးသဖြင့်စက်လေဟာနယ်နှင့်သစ်သားအမှုနှင့်အတူထုပ်ပိုးနေကြသည်. စက် size.step တဦးတည်းနှုန်းအဖြစ်ကွန်တိန်နာဝန်: စက်ရှင်းလင်းရေးနှင့်အချို့သော oilStep တဦးတည်းထား :သံမဏိ contect ...
နေအိမ် လွန်ခဲ့သော 1 နောက်တစ်ခု နောက်ဆုံး - Total51 မှတ်တမ်�စုစုပေါငျး��ားလက်ရှိစာမျက်နှာ / Total 1 10 စာမျက်နှာနှုန်း